आफैंलाई मतदान गर्न नपाउने उम्मेदवार
थप समाचारबिहिवार, मंसिर २१, २०७४
४५ जिल्लामा भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका केही उम्मेदवारले आफूलाई नै मतदान गर्न पाएका छैनन् ।
आफ्नो मतदाता नामावली रहेको क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका कारण विभिन्न दलका केही नेताहरुले आफूलाई नै मतदान गर्न नपाएका हुन् ।
आफूलाई मतदान गर्न नपाउनेमा दलका शीर्ष नेता, भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारदेखि प्रदेशसभाका उम्मेदवारसम्म छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मतदान गर्न पाएनन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवारी दिएका ओलीको मतदाता नामावली भक्तपुरमा छ ।
त्यस्तै काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाएनन् । नेपालको नामावली रौतहटबाट छ ।
दाङ क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, सोही क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्य ‘क’ का उम्मेदवार एमाले नेता शंकर पोखरेलले पनि आफूलाई मत दिन पाएनन् ।
महराको रोल्पामा मतदाता नामावली छ भने एमाले नेता पोखरलेको दाङ क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा ‘ख’ मा मतदाता नामावली छ । त्यस्तै सल्यानबाट प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवार एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले पनि आफूलाई मत दिन पाएका छैनन् । ज्वालाको नामावली सल्यानको प्रदेशसभा ‘क’ मा छ ।
काठमाडौंमा मतदाता नामावली भएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नवलपरासी क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार दिएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह र विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाएनन् ।
सिंहले काठमाडौं क्षेत्र नं ७ बाट मतदान गरेका छन् भने मिश्रले ललितपुरबाट मतदान गरे ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला झापा क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार भएपनि उनको नामावली झापाकै क्षेत्र नं १ मा छ ।
अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेसको तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, काठमाडौं क्षेत्र नं ५ का उम्मेदवार डा. प्रकाशशरण महत, कैलाली क्षेत्र नं ५ की उम्मेदवार डा. आरजु राणा देउवा, भक्तपुर क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार दमननाथ ढुंगानाले पनि आफूलाई मतदान गर्न पाएनन् ।
काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं १० बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार माओवादी नेता हितमान शाक्य, क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार अनिलकुमार शर्मा, क्षेत्र नं ६ का उम्म्मेदवार झक्कुप्रसाद सुवेदीले पनि आफैंलाई मतदान गर्न पाएनन् ।
त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजपा नेता राजेन्द्र महतो, माओवादी नेता राम कार्की पनि आफूलाई मतदान गर्न नपाउने नेता हुन् ।
आइतवार, कार्तिक ४, २०७५ निर्मला हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको भन्दै एसपी विष्टलाई सेवाबाट निष्काशनको सिफारिस
आइतवार, कार्तिक ४, २०७५ हात भाँच्चिएका कारण मेस्सी तीन हप्ता खेल्न नसक्ने
आइतवार, कार्तिक ४, २०७५ दाङमा ७०५ मुक्त कमैयालाई जग्गा
आइतवार, कार्तिक ४, २०७५ पतर्कीहरू